SBO/VOL - Caamsaa 12, 2018 - Injifannoon amme Gooticha WBO koo -
SBO/VOL – Caamsaa 12, 2018 – Injifannoon amme Gooticha WBO koo
Injifannoon amme Gooticha WBO koo
Gootichi WBO dhiha Oromiyaa keessa sossohu guyyaa har’aa Caamsaa 12, 2018 Godina Qellem Wallaggatti humna waraanaa wayyaanee irratti tarkaanfii laalessaa fudhateen Jeneraala Takkaa jedhamu dabalatee loltoota diinaa 100 ol ajjeesuun Injifannoo boonsaa galmeesse.
(SBO/VOL – Caamsaa 12, 2018) – Irree fi gaachanni ummata Oromoo gootichi WBO Godina Dhihaa guyyaa har’aa Caamsaa 12, 2018 Godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii ganda Laaloo Garee bakka Laga Tsabalaa jedhamutti waraana wayyaanee konkolaataa ORALii lamaa fi 3F sadiin Beegiitii gara magaalaa Dambi Doolloo sossohaa turan haxxee itti hidhuun tarkaanfii boonsaa irratti fudhateen Jeneraal Takkaa jedhamuu fi loltootni isa duukaa turan 100 ol ta’an ajjeefamuu Ajaji WBO Godina Dhihaa beeksise.
Tarkaanfiin kun kan fudhatame ganama keessaa naannoo sa’aa 10:00 irratti yoo tahu, tarkaanfii kanaanis ORALiin diinaa tokko loltoota irra turan waliin akkasumas konkolaataan 3F tokko guutummaatti barbadaa’uu Ajaji WBO Godina Dhihaa ifa godheera.
Tarkaanfiin waraana wayyaanee irratti fudhatame kun naannooma sanatti walitti fufiinsaan geggeessamuu kan hubachiise Ajaji WBO Godina Dhihaa, waraanni wayyaanee ORALii isa lammaffaa irra turan rifaatuudhaan harca’anii baqachuuf yaalanis gootichi WBO hordofee haleelee jira. Tarkaanfilee WBO kanaan walumatti loltootni diinaa 100 ol ta’an akka ajjeesaman Ajaji WBO Godina Dhihaa hubachiiseera.
Caamsaa 06, 2018 WBOn Godina Dhihaa G/Q/Wallaggaa Ona Gidaamii magaalaa Qellem bakka Buusii Booyyee jedhamutti Waraana wayyaanee sakattaa WBO’f kankolaataa Oraalii Sadii fi 3f tokkoon socho’aa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota diinaa 22 ol daaressuun ni yaadatama.
Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO): Caamsaa 12 Bara 2018.
Oduu Amma Nugaheen Mootummaan Wayyaanee Godina Qeellam Wallaggaa Ona Begii fi Naannoo isheetti tarkaanfiwwan WBO irratti fudhachaa jiruun rifaattee Heeliikooptara waraanaa kaaftee ummata nagaa rukuchuuf qophii xumurachuu maddeen keenya dhaamsa nuu erganiin ibsanii ummatin keenya of eeggannoo jabaa akka godhu gaafataniiru.itti dabaluunis yeroo ammaa kana Net Workn guutummaa guutuuti cufamee waan jiruuf odeessa umnaata biraan gahuun rakkisaa ta’us namuu bakka jiruu waltti dhaamuun baalaa jarri qaqabsiisuuf karoorffatte kana fashalsuuf gahee isaa akka bahu sabboontotin dhaamsa isaanii kana keessatti beeksisaniiru.
← Oromo Voice Radio (OVR) Broadcasts – 12 May 2018 fi Oduu gara garaa In Ethiopia’s bushlands, promised riches of a railway boom turn to dust →